Arduino IDE 2.0 (beta): nkwuputa gọọmentị nke gburugburu mmepe ọhụụ | Site na Linux
Arduino IDE 2.0 (beta): nkwuputa gọọmentị nke gburugburu mmepe ọhụụ
Isaac | | Aplicaciones, Mmemme
Dị ka ị maara, IDE Arduino ọ bụ njikọta njikọta maka Arduino na bọọdụ ndị ọzọ dakọtara. Na gburugburu ebe a, ị ga-enwe ike ide ihe osise gị ma nyefee ha na efere iji malite ịrụ ọrụ na usoro mmepe a nke ewu ewu n'etiti ndị na-amakarị na ndị na-eme ya.
Arduino IDE, n'agbanyeghị ihe ọ nwere ike iyi, ọ na-aga n'ihu na-emepe iji meziwanye gburugburu ebe a kemgbe ga-amalite na 2005. Kemgbe ahụ, ihe abụọ ndị na-apụtaghị ìhè na onye ọrụ agbanweela, yana ụfọdụ ihe gbasara eserese eserese iji mee ka mbadamba mmemme dịkwuo ụtọ.
Ugbu a, nke a gburugburu ebe obibi na-agbanwe agbanwe, na-akwado nyiwe dị iche iche, otu n'ime ha bụ Linux, yana ịdị na asụsụ 66 dị iche iche, dị ka Spanish, yana nkwado maka bọọdụ ndị ọrụ gọọmentị na ndị na-akwadoghị 1000. Na mgbakwunye, o nwere ọtụtụ puku akwụkwọ nwere ike inye aka, yana ihe karịrị nde 39 na nbudata n'oge afọ gara aga.
Ihe dị ọhụrụ na Arduino IDE 2.0 Beta
Ma ihe niile ga - abụ akụkọ ihe mere eme ma ọ bụghị nkasi obi na - elekọta mmepe ya na-aga n’ihu na-arụ ọrụ na-abụghị ndị na-eme ka a software ọbụna mma. Ihe akaebe nke a bụ ọkwa dị ugbu a nke Arduino IDE 2.0, nke malitegoro "igosi isi ya", agbanyeghị na ọ ka bụ ụdị Beta (nwalee ya ebe a).
Na ụdị ọhụrụ a nke Arduino IDE enwere ụfọdụ ozi na-atọ ụtọ nke ga-akwụsị ịdị nke ikpeazu, ọ bụ ezie na nke a ibuo version ka nwere ihe ụfọdụ na-egbu maramara na ike inye ụfọdụ nsogbu na a ga-ofu maka ikpeazụ tọhapụ.
N'etiti akwụkwọ akụkọ ọhụụ, ha nwere ike igosipụta ọrụ dị elu nke ga-apụta na ụdị a. Arduino IDE na-aga n'ihu na-eme ka interface ya dị mfe, maka ndị ọrụ novice, mana ugbu a, ọ ga-agụnye atụmatụ ọhụụ ọhụụ. Iji maa atụ, ndụ debugging, ya bụ, inwe ike ime koodu na bọọdụ etinyere ya ma kwụsị ya na akara akara iji hụ ọdịnaya nke mgbanwe, ebe nchekwa, ndekọ, wdg, yana nwee ike ịchọpụta nsogbu.
N'aka nke ọzọ, ọ gụnyekwara a nchịkọta akụkọ nke oge a, na-enye ahụmịhe onye ọrụ ka mma n'ihi interface na-anabata, ụzọ mkpirisi igodo, akpaaka iji tụpụta mgbanwe, ọrụ, wdg, na mkpokọta ngwa ngwa. Ọfụfụ karịa na ụdị nke Arduino IDE 2.0 Beta a.
Ma ọ bụrụ na nke ahụ ezughị, nbipu ndụ na-akwado ihe niile mbadamba arduino na ndị dabere na SAMD na Mbed. N'ezie, ndị na-ahụ maka koodu ahụ meghekwara maka bọọdụ ndị ọzọ iji gbakwunye nkwado maka mbadamba ndị ọzọ.
El ọhụrụ IDE ọ dabere na Eclipse Theia kpuchie ya, nke n'aka nke ya dabere na otu ụkpụrụ ụlọ dịka VS Code, ebe edere ihu n'ihu na TypeScript, na ọtụtụ ederede azụ ugbu a na Golang.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Arduino IDE 2.0 (beta): nkwuputa gọọmentị nke gburugburu mmepe ọhụụ
EKWEK DNS nwere nkwado DNS nyere HTTPS